सचेत रहनुहोस्, कतै यस्तै आँप त खाइरहनु भएको छैन ! – Idea Khabar
सचेत रहनुहोस्, कतै यस्तै आँप त खाइरहनु भएको छैन !
आइडिया खबर२०७६ असार ७, शनिबार ०९:५५
विराटनगर, ७ असार । तराईमा जेठ मध्यदेखि आँप पाक्न सुरु भइसकेको छ। तर, ती आँप बजारमा नपुग्दै भारतीय आँपले नेपाली बजार ढाकिसकेका छन्। वैशाख मध्यदेखि नै मोरङसहित तराईका बजारमा पाकेका आँप धमाधाम बिक्री भइरहेका छन्।
हेर्दा आकर्षक देखिए पनि भारतबाट आएका सबै आँप विषादी हालेर पकाइएका छन्। सबै आँपमा विषादी प्रयोग गरेको भेटिएपछि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने विषादी मापन प्रयोगशालाका अधिकारी बताउँछन्। ‘पाक्ने समयअगावै विषादी हालेर पकाएका आँपले बजार ओगटेको छ, परीक्षण गर्दा विषादीको मात्रा प्रमाणित भएको छ। तत्काल केही असर नदेखिए पनि विषादीरहित जस्तो स्वस्थकर हुँदैन’, विषादी मापन प्रयोगशाला प्रदेश १ बिर्तामोडकी प्राविधिक सहायक अञ्जु आचार्यले भनिन् ।
‘क्याल्सियम कार्बाइड’ भन्ने अखाद्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी पकाइएको छ। त्यसको मात्रा बढी भए मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने आचार्य बताउँछिन्। प्राविधिक आचार्यले थपिन्, ‘वैशाखदेखि पटक–पटक परीक्षण गरेको हो, कार्बाइड मात्र पत्ता लगाउन सक्छौं, तर ठूलो परिमाणमा आउने भएकाले अन्य विषादी पनि हुन सक्छ।’ प्रदेश १ का बजारमा आएका र किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु परीक्षण गर्दै आएको विषादी मापन प्रयोगशालाले विषादी प्रमाणित गरे पनि त्यसलाई रोक्न कुनै निकायबाट पहल नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
‘विषादीको थोरै÷धेरै जति भए पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकार हो। जानकारी हुँदा पनि स्थानीय सरकार र भन्सारले विषादीयुक्त आँप रोक्न कुनै पहल थालेको पाइएन’, विराटनगर–१५ का श्याम थापा भन्छन्। देशभित्रै प्रशस्त आँप फले पनि भन्सारले रोक नलगाउँदा विषादीयुक्त भारतीय आँप खान बाध्य भएको अर्का स्थानीय युवराज अधिकारीले बताए।
कार्बोहाइडमा पाइने क्याल्सिनोजेन भन्ने तत्वले क्यान्सर गराउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विराटनगरका स्वास्थ्यकर्मी अर्जुन यादवका अनुसार सिजनअघि विषादी हालेर पकाइएका आँपले क्यान्सर रोग निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा उत्पादन भएका फलफूल, तरकारी, सुन्तला भारतीय बजारमा निर्यात गर्नुपरे क्वारेन्टाइन चेकजाँच भनेर गुणस्तरीय नभएको भन्दै रोक लगाउने गरेको छ। तर, अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएका आँपका लागि नेपालले भने सामान्य क्वारेन्टाइन चेकजाँचसम्म गरेको पाइँदैन।
केही दिनअघि मात्र अनुगमन टोलीले इटहरीको एउटै फलफूल पसलबाट कार्बोहाइड हालेको ४० कार्टुन आँप बरामद गरेको थियो। आँपमा कार्बोहाइड भेटिएपछि नष्ट गरेको उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले बताइन्। खाद्य ऐन २०२३, नियमावली २०२७ ले क्याल्सियम कार्बाेहाइड प्रयोग गरी फलफूल पकाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
परीक्षणमा ३५ प्रतिशतसम्मको विषादीको मात्रा देखिए खानयोग्य मानिन्छ। त्यस्तै, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी पाइएमा केही दिन राखेर विषादीको प्रभाव घटेपछि खान मिल्छ। तर, ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पाइएमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ।
चिकित्सकका अनुसार आँप र केरा पकाउन प्रयोग गरिने क्याल्सियम कार्बोहाइडमा धातुजन्य आर्सेनिक, फस्फोरसको मात्रा अत्यधिक हुने र त्यसले पानीसंँग प्रतिक्रिया गरी एसिटिलिन ग्यास उत्पादन गरी मानिसको स्नायु प्रणालीको तन्तु प्रभावित बनाउँछ। पूर्वको नाका काँकडभिट्टा र जोगबनी हुँदै दैनिक दर्जनभन्दा बढी ट्रक भारतबाट आँप लिएर नेपाल भित्रिने गरेको प्रदेश १ कृषिथोक बिर्तामोडको तथ्यांक छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रविन भट्टराईले खबर लेखेका छन् ।
२०७८ बैशाख १, बुधबार २१:३७
२०७५ कार्तिक १३, मंगलवार ०८:०७
तपाईको उचाई अनुसार तौल कति हुनुपर्छ ? यसरी आफै थाहा पाउनुहोस्
२०७८ बैशाख २, बिहीबार ०५:४५